Global Voices teny Malagasy · admin – Febroary 2017
admin · Febroary, 2017
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Febroary, 2017
Mpampiroborobo Fatratra Ny Teny Quechua, Mandray Anjara Amin'ny Fanamby Meme (Sary-Sy-Soratra Mampihomehy) Ho An'ny Tenindrazana
Mediam-bahoaka21 Febroary 2017
Margot Camonesdia mpandika teny, mpampianatra Quechua Ancashino sy ny sisa maro hafa. Mandray anjara amin'ny Fanamby Sary-sy-soratra ho an'ny Tenindrazana izy.
"Misy ireo vehivavy novonoina kanefa tsy nanao fahadisoana, mampiasa ity lalàna ity ny olona mba hanamarinana ny famonoana ny vehivavy."
Mitaky Fampihenàna Ny Vola Miditra Amin'ny Antoko Politika Ny Hetsika Iray Ao Meksika
Meksika18 Febroary 2017
#SinVotoNoHayDinero, hetsika tarihin'ireo solombavambahoaka tsy miankina roa mba hampihenàna ny vola miditra amin'ny antoko politika.
Amerika Avaratra10 Febroary 2017
Atahoran'ireo Ray Aman-dreny Sasany ao Hong Kong Fa Tia Ireo Andriambavin'ny Disney Ireo Zanany Lahy
Azia Atsinanana10 Febroary 2017
"Manakaiky ny taona 2020, sarotra ny mieritreritra fa ireo ankizivavy ihany no afaka mitia ny loko mavokely. Tena nilaozan'ny toetrandro ny fitsaratsaram-poana toy izany."
Eoropa Afovoany & Atsinanana09 Febroary 2017